बाख्रा पालनमा जमेका देवराज - मालागिरी समाचार
Home›Featured›बाख्रा पालनमा जमेका देवराज
ईन्टरनेटले बन्यो प्रेरणाको स्रोत
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ का देवराज वली २३ वर्षकै उमेरमा व्यवसायिक बाख्रा पालनमा जमेका छन् । उनी पैसा कमाउनकै लागि विदेश गए, एक वर्ष विदेश बसेर फर्केका उनको बाख्रा पालन गर्ने प्रेरणाको मुख्य स्रोत ईन्टरनेट बन्यो । ‘पैसा कमाउन बिदेश गए’ उनले भने‘ त्यतिबेलै मैले नेट ईन्टरनेटमा व्यवसायिक बाख्रा पालनको बारेमा समाचार पढे र त्यसले मलाई पनि बाख्रा पालन गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भयो ।’
२०७३ सालमा शीर्जनशील बाख्रा तथा कृषी फर्म सञ्चालनमा ल्याएर व्यवसायिक रुपमा बाख्रा पालन गरिरहेका छन् । आफुले मात्रै बाख्रा पालन गरेका छैनन्, समाजका अरुलाई पनि व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरिरहेका छन् । ‘व्यवसायी बिना आय–आर्जन सम्भव छैन’ उनले भने ‘त्यसैले समुदायमा पनि व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणा जगाउदै आएको छु ।’ पछिल्लो समय विदेशजतिकै पसिना नेपालमा बगाए नेपालमै मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ, भन्ने उदाहरण आफु भएको भन्दै नेपालमै श्रम गर्न प्ररणा दिने गरेको उनको भनाई छ ।
विदेशमा फलाम खानीमा काम गर्ने गरेका उनले नेपालमा करिब मासिक दुई लाखको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने गरेको बताउछन् । ‘बिदेशमा फलाममा काम गर्थे, त्यति जटिल काम गर्दा पनि सोँचे जस्तो आम्दानी हुन सकेन्’ उनले भने ‘ तर नेपालमा त्यतिकै दुःख गरे राम्रो आम्दानी हुने रहेछ ।’
अहिले उनको फर्ममा ५० भन्दा बढी बाख्राहरु छन् । त्यसमा दुईवटा बोयर पनि छन् । एकलाख २५ हजार रुपैयामा दुईवटा बोयर ल्याएको उनले बताए । ‘मासु पनि धेरै हुने र छिटो छिटो बढ्ने, मासु पनि महंगो हुने भएकाले बोयर ल्याएको हुँ’ उनले भने‘ यी दुई वटा बाट राम्रो आम्दानी भएपछि बोयरलाई थप गर्ने योजना बनाएको छु ।’ ४÷५ वटा बाख्राबाट व्यवसाय शुरु गरेका उनले शुरुमा करिब ७ लाख लगानी लगाएका थिए । अहिले ग्राहक घरमै आउने गरेको समेत उनले बताए ।
सोही लगानीबाट उनले सात जनाको परिवार पालिरहेका छन् । साथै घरका सबैलाई कृषि फर्ममा काम समेत लगाएका छन् । बिगत जस्तो त्यतिकै बस्नु पर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ । साथै परीक्षणका रुपमा केही टर्की पनि पालन गरेका छन् । दुईवटा टर्की ल्याएर पालन गरेको र राम्रो आम्दानी हुने भए पनि व्यवसायिक रुपमा लिने समेत योजना रहेको उनले बताए । उनलाई व्यवसायिक रुपमा पशुपालन गर्दा रमाईलो लाग्ने गरको अनुभव सुनाउछन् । ‘म बच्चै देखि पशुसंग रमाउने गर्थे’ उनले भने ‘त्यसैले मलाई अहिले पनि पशुपालन गरिरहदा रमाईलो महसुस भएको छ ।’
कक्षा १२ मा पढेका उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ लाई बोयर बाख्राको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको समेत बताए । वडाका सबैलाई बाख्रापालन तर्फ प्रेरित गरेर त्यस क्षेत्रमा बोयर बाख्राको केन्द्र बनाउने उनले बताए । त्यसका लागि आसपासमा केही समूह पनि गठन गरेको उनको भनाई छ । जसबाट उनले व्यवसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपालन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाका बारेमा पनि जानकारी दिने गरेका छन् ।
उनले अबको केही समय पछि उपमहानगरपालिकासंग सहकार्य गरेर बोयर पाल्ने योजना रहेको बताए । उनले बाख्राका लागि आवश्यक पर्ने घाँसका लागि करिब १८ कठ्ठामा विभिन्न प्रजातिका घाँसहरु पनि रोपेका छन् । ‘बर्षे घाँस, डाले घास, काभ्रो, किमो, कोटिमारो, बराला, बटारेलगायतका घाँसहरु आफ्नै खेतमा लगाएको छु’ उनले भन े‘यसैबाट बाख्रालाई आवश्यक पर्ने घाँस खपत गरिरहेको छु ।’ उनले सरकारबाट पाउने अनुदान बास्तविक किसानले पाउनुपर्ने समेत बताए । उनले अब खरी र बोयर तथा अचमरी जातका बाख्रा पाल्ने योजना बनाएको बताए । सबै बाख्राको बिमा पनि गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि प्रोत्साहन गरको उनले बताए । उपमहानगरपालिकाले तारजाली लगाउनका लागि ५० हजार दिएको बताए । साथै कान्छो किसान भएको भन्दै थप हौसला प्रदान गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।